Mapar sy Tim : Raikitra ny ady an-trano -
AccueilRaharaham-pirenenaMapar sy Tim : Raikitra ny ady an-trano
07/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Efa nazava tanteraka ny toerana izay raisin-dRavalomanana Marc manoloana ny hetsika fanakorontanana sy fanonganam-panjakana, izay kasain’ ireo solombavambahoaka tanterahina etsy amin’ny kianjan’ny fifankatiavana Analakely, “tsy hetsiky ny TIM io, ny antoko tarihiko dia tsy mankasitraka velively ny fanonganam-panjakana” . Mazava ihany koa izao izany fa tsy anatin’ny hetsika i Ravalomanana, ary mazava ho azy fa manaraka ny lehiben’ny antokony ireo solombavambahoaka. Ankehitriny vokatr’io zava-misy io dia efa tsy nisy ny fifankahazoana eo amin’ ny TIM sy ny MAPAR, ary mampiseho izany ireo izay miandraikitra ny serasera, na io amin’ny haino aman-jery, na io amin’ny tambazotra sosialy. Hita nanivaiva ny TIM izao ny lahatsoratra iray izay navoakan’ny gazetin’ ny MAPAR nanaratsy ny antoko TIM, ankilany namaly bontana ny antokon-dRavalomanana fa raha tsy izy ireo dia tsy tahaka izao ny tolona. Raha ny ao amin’ny tambazotra sosialy indray no jerena dia efa mifamoaka tsiambaratelo ireo antoko roa ireo, toa ny sary navoakan’ny TIM tamin’ny fangalaran’ny mpikambana Mapar ny findain’ ny loholona Olivier Rakotovazaha.
Midika izany fa ao anatin’ ny ady mangatsiaka tanteraka ny tariky ry Maitre Hanitra Razafimanantsoa sy ry Razanamahasoa Christine amin’izao fotoana izao, mandeha anjambany ihany koa ny tolon’izy ireo amin’izao fotoana izao. Ireo rehetra ireo rahateo no tsy nampisy ny tolona ny sabotsy lasa teo, satria tsy nisy intsony ny fanomanana ny tetika sy ny zavatra hotontosaina. Efa mifandrirotra rahateo ny roa tonta ihany, koa amin’izay tena hitarika ny etsy Analakely, ary hatramin’ izao dia tsy fantatra ny tena zavatra hisy marina. Zary efa mazava amin’ny mpitokona rahateo ny zava-misy eo amin’ny mpitarika amin’izao fotoana izao , ary antony iray tsy nahatongavan’ny mpanara-dia maro intsony. Ahiana amin’izao fotoana izao ihany koa ny ady eo amin’ny TIM sy ny MAPAR, satria dia samy tsy misy manaiky lembenana ny tsirairay, ary efa samy nahavita be tamin’ izay hetsika notontosaina rehetra.